Baro Dalkaaga Hooyo - Wershedaha Soomaaliya - iftineducation.com
aadan21 / January 18, 2012
Wershadaha Soomaaliya in kasta oo aysan aad u fara badnayn, hadana waxaa lagu qiyaasay in ay dhaqaalaha waddanka ku siyaadin jireen boqolkiiba-toban [10%]. Qaybo kamida wershadihii Soomaaliya iyo xilliyadii la asaasay waa kuwan hoos ku qoran:
Wershedda Sonkorta Jawhar:
1919 ayaa shirkad talyaani ah asaastay wershadda sonkorta ee jawhar. Sannadkii 1960 kii ayaa wershaddaas 50% kamida loo ogolaaday Soomaaliya. Wax soosaarkeediina waa kan hoos ku qoran:
Wershedda Cusbada Xaafuun:
1922 ayaa shirkad Talyaani ah asaastay wershadda cusbada [solar Salt production]. Waxaan laga dhisay Hurdiye – xaafuun. Wershaddaasi waxay soo saari jirtey cusbo dhan 250,000 ilaa 300,000 tons sannadkii. Waxaana wershaddaas hawlgab ku noqday dagaalkii Ingiriiska iyo Talyaaniga ee 1940-1941.
Wershedda Caanaha Xamar:
1965 ayaa wershadda caanaha ee xamar shaqa bilawday. Wax soosaar keeduna wuxuu ahaa 10,000 litir oo caano ah maalintii.
Wershedda Hilibka Kismaayo:
1968 ayaa la dhamaystiray wershadda hilibka ee kismaayo. Waxayna qali jirtey sannadkii 60,000 neef oo lo’ah, si ay u soo saarto 20 million oo hilib qasacadaysan ah.
Wershedda Kalluunka Laasqoray:
1969 ayaa la dhamaystiray Wershadda Kalluunka ee laasqoray. Waxayna shaqo ku bilawday 5,000 tons oo qasacadood oo Toono ah sannadkii.
Wershedda Dharka Balcad:
1969 ayaa la dhamaystiray wershadda dharka ee Balcad. Waxayna soo saari jirtey dhar kala noocnooc ah, khaas ahaan dharka dugsiyada.
Waxaa kale oo xusid mudan wershedaha kala ah:
Wershadda Kalluunka ee Xaabo, Qandala, Weshadda Sonkorta ee Mareerey, Wershadda Birta ee Xamar, Wershadda Sigaarka iyo Tarraqa ee Xamar, Wershadda Baastada ee Xamar, Wershadda Shamiitada ee Berbera iyo kuwo kale. Ogow akhristow in wershadahaas kor ku xusan dhammaantood ay hawlgab ahaayeen markii aan qorayey boggan, ogaantayda!.
Souce : Somalitalk.com
Qoraaladaan oo aan diiwaan ahaan u hayey waxaan kasoo qoray buugaag aan ka akhriyey Jaamacadii Soomaaliya [Gahayr], ka hor 1991.
Baro Dalkaaga Hooyo – Macdanta iyo Saliidda Soomaaliya